Wasiirada maaliyadda DF iyo Somaliland oo yeeshay wada-hadal qarsoodi ah iyo Biixi oo la dhinac maray - Caasimada Online
Home Somaliland Wasiirada maaliyadda DF iyo Somaliland oo yeeshay wada-hadal qarsoodi ah iyo Biixi...
Wasiirada maaliyadda DF iyo Somaliland oo yeeshay wada-hadal qarsoodi ah iyo Biixi oo la dhinac maray
Hargeysa (Caasimada Online) – Majalada caalamiga ah ee Indian Ocean ee dalka Faransiiska ayaa cadadkeedii u dambeeyay ee Jimcihii waxay daabacday warbixin ay ku sheegtay in wasiirka maaliyadda Somaliland Yuusuf Maxamed Cabdi uu wada hadalo qarsoodi ah la yeeshay dhigiisa Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle iyo masuuliyiin kale oo ka trisan madaxda dawladda Soomaaliya.
Warbixintan oo uu beeniyay wasiirka maalilyadda Somaliland Yuusuf Maxamed Cabdi, ayaa waxay sheegtay inaanu Madaxweyne Biixi ka warqabin wada hadaladaas oo ay Indian Ocean News ku tilmaantay “Suurtagalnimada in la iswaafajiyo dakhligooda cashuurta iyo qaabdhismeedka nidaamkooda maaliyadeed si loo buuxiyo shuruudaha baanka adduunka iyo sanduuqa lacagta adduunka (IMF) iyo si ay dib ugu qiimeeyaan deymahooda iyo siinta deymaha.”
Warbixinta ayaa intaas raacisay “Hindisahani waxa uu dawladda Federaalka Soomaaliya u ogolaanayaa in ay qayb deyntaas ka mid ah u cayinto/siiso Somaliland, laakiin waxaa ku xidhan shardi ah in marka hore heshiis adag oo siyaasi ah la gaadho (Soomaaliya iyo Somaliland).”
Wasiirka maaliyadda Somaliland ayaa warkan ku tilmaamay mid been ah. “Warkaasi waa mid la sameeyay oo been ah, waxbana kama jiraan, suurtogalna maaha inuu wada hadal na dhex maro Soomaaliya, waayo anigu waxaan ku shaqeeyaa siyaasadda madaxweynaha oo ah inay Somaliland iyo Soomaaliya kala yihiin laba dal oo kala duwan.” ayuu yidhi Wasiirka maaliaydda Somaliland, oo intaas raaciyay, “Markaas warkaasi waa been aanay waxba ka jirin.”